Manentana ny spice taloha: Rehefa ao anaty fisalasalana ianao dia mandeha moana. Martech Zone
Indraindray tiako ny varotra ary mamolavola paikady maharitra izay manova ny fomba fijerin'ny orinasa iray, mampitombo ny fandraisana marika, mampivarotra ny varotra ary mihombo ny fahombiazan'ny orinasa. Tsy iray amin'izy ireo ny anio.
Mirehitra ny tontolon'ny varotra an-tserasera ao amin'ny mamirapiratra paikadin'ny Lehilahy Spice taloha.
Raha ianao dia iray amin'ireo vitsy tsy mbola nandre, ilay rangahy Spice taloha dia miasa mafy mamaly ireo sioka amin'ny alàlan'ny fantsona Youtube azy manokana. Izy dia mamaly olona manana fanarahana be dia be hatrany amin'ireo izay manana mpanaraka kely (fa ny ankamaroan'ny manaraka dia lehibe).
Tena ambany sy moana ve isika? Atsipazo lehilahy tsara tarehy iray misy tsofoka feo be ao anaty lamba famaohana ary omeo azy ireo comebacks mahatsikaiky ary izao tontolo izao dia mijery azy ho toy ny genius madio. Io ve no original? Sa tsy izany fotsiny ilay Mandehana fampielezan-kevitr'i Papa dada Re-noforonina? Tena izy ve fa mahagaga?
Maizimaizina? Firaisana ara-nofo sy ny tanàna? Sahona amin'ny varotra labiera? Mandehana dadany Boobs? Lehilahy Spice taloha? Angamba tokony hiala amin'ny fiezahana ho hendry daholo isika rehetra ary hanadino azy kely.
PS: Izaho izay ambany sy moana. Tiako ireo dokambarotra ireo ary mpihatsaravelatsihy tanteraka aho. Na izany aza, hijoro aho fa tsy nanimbolo ny Spice taloha hatramin'ny nahitako ny raiko nahazo azy ho toy ny stocking stockers tamin'ny taona 70. Heveriko fa tsy nampiasainy izany. Mampametra-panontaniana hoe: “Tena mivarotra spice taloha ve io fampielezan-kevitra io?"
Tags: dokam-barotramanitra talohafampielezana zava-manitra talohahaino aman-jery sosialy
Jul 15, 2010 amin'ny 7: 52 AM
Tiako ity fanentanana ity! Moa ve ianao efa nanaraka ny nifandimby teo amin'i Old Spice Guy sy Alyssa Milano? Nalain'i Alyssa mihitsy aza ny valinteniny tamin'ny horonan-tsary nangataka an'i Old Spice Guy handefa 100 tapitrisa dolara ho an'ny tahirim-bola fanampiana ny fiparitahan'ny solika rehefa avy nandefa raozy am-polony izy.
Ny valinteniny dia amin'ny http://www.alyssa.com/
Jul 15, 2010 amin'ny 8: 14 AM
Manaiky tanteraka aho fa tiako koa, Patric. Izay anefa no hevitro. Tokony handao ny fampielezan-kevitsika be pitsiny sy mitete rehetra ve isika ary manoratra andalana mampihomehy fotsiny ary mangataka olona hampiseho hoditra hanao ny varotra?
Jul 15, 2010 amin'ny 8: 20 AM
Lehilahy aho ka mazava ho azy fa tsy misy dikany amiko ny anton'ny hoditra. Ny resaka mampihomehy omeny azy sy ny fomba fiteniny kosa no mampihomehy ahy. Amin'izao fotoana izao ny vehivavy etsy ankilany dia mety manana hevitra hafa.
Noho izany dia heveriko fa tsy momba ny hoditra izany. Momba ny hoe kinga. Heveriko fa ny lahatsary Toyota "Swagger Wagon" dia iray amin'ireo horonan-tsary mahatsikaiky indrindra sy mahatsikaiky indrindra (varotra?) izay hitako hatramin'izay. Ary eny, mahatonga ahy te hividy Toyota Sienna izany.
Raha ny momba an'i GoDaddy, mazava ho azy fa mahomby ny fiantsoana hoditra. Saingy raha ny marina, nividy tamin'ny GoDaddy aho talohan'ny nivoahan'ireo doka ireo ary tsy nividy intsony aho noho ny doka. Raha rahampitso HostGator dia nanomboka nampiseho doka "hoditra" dia hamindra ny zava-drehetra amin'izy ireo aho noho ny doka. Tsy hividy ny sehatra manaraka ahy amin'ny alalan'izy ireo koa aho.
Jul 15, 2010 amin'ny 8: 21 AM
Crud, fehezanteny farany ao amin'ny HostGator dia tokony hoe "Tsy * hamindra ny zava-drehetra amin'izy ireo aho..."
Jul 15, 2010 amin'ny 8: 32 AM
“Izany anefa no hevitro. Tokony handao ny fampielezan-kevitsika be pitsiny sy mitete rehetra ve isika ary manoratra andalana mampihomehy fotsiny ary mangataka olona hampiseho hoditra hanao ny varotra ataontsika? " — Doug, tsisy fanafintohinana fa lavitra anao izany. Old Spice dia mamerina mametraka ny marika ho an'ny mpihaino tanora miaraka amin'ny varotra tena mamorona. Mampiasa haino aman-jery maro izy ireo, pirinty, fahitalavitra, an-tserasera (YouTube), ary media sosialy mba hanatratrarana ireo mpihaino kendrena. Ahoana, amin'ny maha mpivarotra anao, no hilazanao fa tsy fanombohana tsara amin'ny fampielezan-kevitra tena tsara izany? Satria fotsiny tsy manana fampielezan-kevitra mitete izy ireo dia tsy midika fa ratsy ny varotra.
Jul 15, 2010 amin'ny 10: 10 AM
Heveriko fa fanontaniana atahoran'ny olona hamaly amin'izao fotoana izao ny 'hivarotra Spice Old bebe kokoa' ity 🙂
Heveriko fa ho tanteraka izany. Izany rehetra izany dia tsara ho an'ny marika. Heveriko fa maro no hijery vaovao momba ny Old Spice noho ny nieritreritra an'izany nandritra ny 2 andro nifanesy… indrindra raha mampiasa fanasan-damba mamerovero ho an'ny vehivavy izy ireo 🙂
Na izany aza, manao zavatra ho ahy ve ny marika mba hifandraisako ara-pihetseham-po aminy? Manorina tsy fivadihana ve izany? Ankoatra ny maha-mpanara-dia azy, tsy tena. Heveriko fa ampahany iray amin'ny zavatra mbola ho avy amin'ilay antsointsika ara-pomba ofisialy hoe dokambarotra ity fanentanana ity.
Jul 15, 2010 amin'ny 10: 12 AM
Douglass, tena mampihomehy ilay fanentanana. Mahatonga ny olona hiresaka momba ny marika izany. Izay amin'ny marika noheverina ho zavatra ampiasain'ny dadanao na ny raibenao ihany no dingana voalohany amin'ny fitaomana ny olona hanandrana izany indray. Niova be ny Old Spice satria taorian'ny niharatra ihany. Heveriko fa ny Old Spice dia mandeha kokoa amin'ny mahatsikaiky sy fanehoan-kevitra mampihomehy ala The Most Interesting Guy in the World, noho ny zavatra hafa toa an'i Axe.
Tsy afaka miombon-kevitra aminao momba ny fampitahana amin'ny GoDaddy aho. Mazava ho azy fa mikendry ny lehilahy amin'ireo dokambarotra ireo i GoDaddy. Raha hampiasa ny Sex Appeal hivarotra ny Old Spice, dia ho azon'izy ireo hianjera eo amboniny ny ankizivavy GoDaddy, mitovy amin'ny Axe.
Miombon-kevitra amin'ny hevitra maro ataon'i Patric aho, ary ny "Swagga Wagon" dia varotra lehibe, ary mahafinaritra ihany koa ny dokam-barotra Trunk Monkey. Heveriko fa maharitra kokoa ny Funny ary tsy hay hadinoina kokoa.
Jul 15, 2010 amin'ny 10: 13 AM
Tsy maintsy lazaiko fotsiny aloha fa tiako koa ity fanentanana ity. Mampiala voly ary te hirotsaka an-tsehatra ny olona. Inona koa no mety nangatahiny.
Ankehitriny, raha ny fanontanianao momba ny fivarotana Old Spice marina dia azo iadian-kevitra izany. Heveriko fa ny ankamaroan'ny olona dia mitovy hevitra momba anao hoe "izany no nampiasain'ny raiko tamin'ny taona 70" saingy heveriko fa ny fanentanana dia manandrana manova io sary io. Miezaka ny hahatonga ny tanora hihevitra azy io ho marika mahafinaritra fa tsy ho an'ny raiko.
Tena nahatsikaritra olona iray tao amin'ny twitter-ko aho androany maraina nilaza fa taorian'ny nijerena ilay camaign dia nisokatra kokoa tamin'ilay marika izy ireo noho ny teo aloha. Midika ve izany fa hividy izany izy ireo? Angamba. Izany dia hidina amin'ny fitiavany ny fofony, saingy heveriko fa betsaka kokoa ny olona mijery ny zava-manitra taloha ao amin'ny fivarotam-panafody noho ny teo aloha.
Sheldon, mpitantana ny vondrom-piarahamonina ho an'ny Sysomos
Ankehitriny aho mitaingina soavaly!
Jul 15, 2010 amin'ny 10: 32 AM
Raha mbola tsy namaky ny fomba namoronana ireo dokambarotra ireo tamin'ny alàlan'ny media sosialy sy novokarinao tamin'ny fotoana tena izy, dia tena mahaliana tokoa ny famakiana: http://www.readwriteweb.com/archives/how_old_spice_won_the_internet.php?
Lahatsary tsara kalitao amin'ny fahitalavitra novokarina an-nidina tao anatin'ny 7 minitra eo ho eo.
Jul 15, 2010 amin'ny 10: 39 AM
Eny, adala aho mieritreritra fa mahafinaritra ny Old Spice ary mandaitra izany. Raha jerena fa ny ankamaroan'ny olona dia mbola manodina ny Old Spice ho marika Old Man - mampametra-panontaniana izany - Nisy tamin'ireo dokambarotra marika sy dokambarotra ary printy ireo ve niasa? Manome toky aho fa lafo lavitra noho ny ezaka YouTube Old Spice izy ireo.
Jul 15, 2010 amin'ny 10: 47 AM
Miaraka aminao aho, noheveriko fa mampiala voly, mahasarika ary vita tsara izany, saingy tiako ny hahita ny fiantraikan'ny varotra alohan'ny hanambarantsika azy ho fahombiazana amin'ny media sosialy…
(Nibilaogy momba izany aho teto: http://bit.ly/9SiQ3L)
Jul 15, 2010 amin'ny 10: 51 AM
Nody tany an-trano ny sipako omaly alina ary nilaza tamiko fa naka ny Spice Old izy ary sambany vao nanomana izany omaly noho ireo horonan-tsary ireo. Hita fa tiany ilay izy, ary tiany hanandrana azy aho.
Haben'ny santionany iray izy io, ekena fa ao anatin'io santionany io no miasa. 🙂
Jul 15, 2010 amin'ny 10: 57 AM
Azo antoka fa nahavita izay tian'ny ankamaroan'ny marika izy ireo amin'izao andro izao (fanentanana natosiky ny mpanjifa sy naparitaka), ary lasa 'mangatsiaka' indray ny Old Spice. (Em… nahafinaritra ve izany? Heveriko fa mety ho tanora loatra aho dia mahafantatra betsaka momba ny Old Spice ..)
Amiko, ity karazana doka ity dia tsy voatery hahatonga anao 'hitoky' ny marika, toy ny amin'ny GoDaddy (ny fampiantranoana tranonkala dia zavatra mila haavon'ny fahatokisana - ny fofon'ny lehilahy; tsy dia be loatra) fa raha nahita Old aho Zava-manitra eo amin'ny talantalana fivarotam-panafody, azoko atao tsinontsinoavina izany izao, mba hahitana hoe inona marina ny fofony 🙂 Mifandraika amin'ny marika aho, liana amin'ny marika aho…izay misy dikany daholo izany, sa tsy izany?
Tsara ny moana. Mora hatonina ny moana; mainstream. Ny moana dia fandosirana. Saingy tsy azonao antsoina hoe moana izany. Mahira-tsaina, ary firaisana ara-nofo. Tambajotra tsy azo toherina. 😉
Mahafinaritra ny mandre fomba fijery mifanohitra, fa ity fanentanana ity dia tena hafa noho ny doka GoDaddy Super Bowl. Tsy fampitahana ara-drariny ny IMO. Tsy paoma ho an'ny paoma, fa paoma ho an'ny ribeye.
Ny hany fitoviana amin'ny fanentanana GoDaddy dia ny ampahany "fampisehoana hoditra".
Ekeko fa ny hoditra ho an'ny hoditra dia tsy mahasosotra sy moana raha izay ihany fa amin'ity tranga ity dia ampiasaina amin'ny fomba mifameno amin'ny fampielezan-kevitra mahaliana kokoa.
Porofo? Heveriko fa tsy maro ny ankizivavy nizara ny doka maimaim-poana GoDaddy tamin'ny namany sy ny tambajotra. Raha tsy izany, MARO ny bandy nizara sy nanohy nizara ny doka Old Spice, na dia lehilahy tsy misy akanjo aza no singa hita maso voalohany. Ny fahavononana hanao izany dia mampiseho fa tsy ny “hoditra” no antony izarany.
Ny doka an'i GoDaddy dia dokam-barotra fomba fanao mahazatra, sa tsy izany? Tsy nisy personalization ary tsy nisy fomba ho ahy "hifantoka" mivantana amin'i Danica Patrick. Toy izany koa amin'ireo ohatra hafa ataonao. Na dia tsy mamaly olona iray mametraka fanontaniana aminy aza ilay bandy Old Spice, dia ny fanantenana fa hamaly azy sy ny zava-misy fa mamaly be dia be no mampiavaka azy amin'ny GoDaddy, Twilight, Sex and the City ary ny sahona amin'ny dokam-barotra labiera. .
Ny fifaneraserana sy ny maha-olona azy no mampiavaka an'io. Nisy mpivarotra hendry iray nilaza tamiko fa ny varotra mailaka rehetra dia tokony ho 1) andrasana 2) manokana ary 3) mifandraika. Ny ankamaroan'ny orinasa dia tsy afaka manao amin'ny mailaka akory ary ny Old Spice dia nahavita nanao izany tamin'ny fampielezan-kevitra.
Jul 15, 2010 amin'ny 10: 58 AM
Talohan'ny herinandro lasa teo dia tsy mino aho fa nanonona ny teny hoe 'Espice Old' aho raha tsy hoe hanihany ny fofon'ny antitra. Na izany aza, izaho koa dia nisotro ny fanentanana media sosialy 'Old Spice' Kool-Aid. Tiako izy izany. Mahasarika. Mahatonga ahy te-hihazakazaka ao amin'ny Twitter izany ary mamorona zavatra tena fetsy amin'ny fanantenana fa hanao horonan-tsary ho ahy manokana i Old Spice Guy. Misy ifandraisany amin'ny firaisana ara-nofo aminy ve izany? Tsia. Ny fieritreretana ny laza vetivety (eny, tsy dia lalina loatra aho), fifampiraharahana tena mahafinaritra amin'ny marika iray (na hividy aho na tsia) ary zavatra tena mahafinaritra hozaraina amin'ny namana. Nadika ho fivarotana ho ahy ve izany fientanentanana rehetra izany? Tsia. Fa holazaiko aminao fa amin'ny manaraka aho dia esoriko ny tampon'ny iray amin'ireo bandy ratsy fonony ary haka fofona. Misy sakana iray tena manan-danja eo amin'ny fampielezan-kevitra lehibe sy izaho mandany vola any amin'ny fivarotam-panafody. Izany no vokatra. Raha tsy maimbo dia miasa tsara ary manome lanja ny vola fa tsy manao ny transaction aho. Tsara amin'ny Old Spice noho ny fanerena ahy hametraka ny marika ao amin'ny seha-heveriko.
Jul 15, 2010 amin'ny 11: 00 AM
Araka ny @davefleet:
- Fahatsiarovana: Jereo
– Resadresaka: Jereo
Izany dia araka izay azon'ny ankamaroan'ny fampielezan-kevitra atao, fa ho ahy dia lasa lavitra izany:
– Fiheverana (jereo eny amin’ny talantalana ary AFAKA, eritrereto): Jereo
- Fividianana tokana: Jereo
Hitako ny gf (raha tany Canada izy) mijanona, manimbolo ary te hanandrana azy amiko noho ireo. Mety hitarika fividianana tokana ho an'ny 1/20-n'ny mpijery fotsiny izany, fa anjaran'ny vokatra no mitondra ny fividianana miverimberina.
Fandresena ao amin'ny bokiko izany, izay tena sarotra lazaina satria marivo. Vonoina tsara, mampihomehy mampihomehy, ampidirina amin'ny haino aman-jery sosialy nefa marivo. Ary tiako izany.
Jul 15, 2010 amin'ny 11: 11 AM
Ny hevitr'ireo dokambarotra ireo dia ny:
1. Ampitomboy ny fahatsiarovan-tena. vita.
2. Atombohy ny resaka. vita.
3. Asao ny olona hahatsikaritra Old Spice eo amin'ny talantalana. Vita (vakio ny hevitra etsy ambony).
4. Asao ny olona hividy ny vokatra. Vita indray. Azo antoka fa mbola miditra ny isa fa efa tsikaritro fa ny namako dia manandrana izany na dia nampiasa izany aza ny dadany taloha.
SAINGY mbola tsy hantsoiko hoe tantaram-pahombiazana amin'ny media sosialy izany. Mahomby ve izany amin'ny fanentanana ny marika? Hellz eny. Raha ny marina, manana tally aho hoe iza no handresy amin'ny adilahy Old Spice sy Dos Equis (mihevitra fa tsy nisy i Chuck Norris satria fantatsika rehetra fa handresy izy) FA mandra-pahitako ny isa momba ny varotra ny vokatra hatramin'izao dia natao ho fanentanana ihany.:) Ny fanontaniana dia mety ho tiana ve ianao nefa koa manetsika ny vokatra?
Afaka mitia ilay bandy Dos Equis ianao, fa tianao ve ny labiera Dos Equis? Nividy azy indray mandeha ve ianao taorian'ny dokambarotra vitsivitsy voalohany? Nanohy nividy azy ve ianao taorian'izay? Raha misy tsy fifankahazoana eo amin'ny marika sy ny vokatra dia azonao atao ny mividy tokana izay tsy tanjona farany. Te hamorona tsy fivadihana amin'ny marika ianao - na dia manintona toy inona aza ny teny filamatra.
Heverinao ve fa tsy mitombina aho?
Antsoy aho fa tandremo: Mpifankatia aho fa tsy mpiady fa mpiady koa ka tsy mahazo hevitra.
Jereo izao ny vadinao, jereo izao aho. mitaingina soavaly aho.
Jul 15, 2010 amin'ny 11: 14 AM
Ny alin'iny nandeha an-tongotra teo amin'ny lalan'ny fivarotana enta-madinika aho dia nahita ny Old Spice. Raha tsy ampy fitaovana fidiovana aho dia nividy azy mba hanandrana azy. Ny fampielezan-kevitra dia tena manosika azy io ho ambony indrindra ary ny porofo anecdotal dia mampiseho fa manao fivarotana iray na roa izy io.
Ny tiako indrindra amin'ilay fanentanana dia ny fahatakarany ny toetra hafahafan'ny kolontsaina aterineto. Tsy vitan’ny hoe nanatanteraka ihany ny ekipa fa nihaino sy namaly. Ny filalaovana fitia amin'i Alyssa Milano, hatramin'ny fandefasana raozy any an-tranony. Fanaterana fangataham-bady. Ny valinteny mivantana amin'ny olona tsy misy mpanaraka be dia be izay maneso an'io Old Spice Man io dia miresaka amin'ireo olo-malaza ihany. Ny fanaterana fanamafisam-peo mba ahafahan'ny vondrom-piarahamonina reddit mamorona http://oldspicevoicemail.com
Kanto avo ve ity? Tsia. Fa ny fivarotana savony ve dia zava-kanto avo lenta?
Tena liana amin'ny fianarana ny karazana vokatra ho hitan'ny P&G avy amin'ny fampielezan-kevitra aho ary tiako ny hianatra ny fomba ampitahan'ity fampielezan-kevitra vao haingana ity amin'ny doka super-bowl voalohany, na eo amin'ny resaka fahatsapana na amin'ny resaka varotra.
… tsiky monocle P_^
Jul 15, 2010 amin'ny 11: 18 AM
Fantatrao ve hoe ahoana no ahafantaranao fa fampielezan-kevitra fandresena lehibe ity?
Noho ny fanehoan-kevitra azo. Tena marina ianao amin'ny famakafakanao fa amin'ny faran'ny andro dia toy ny zavakanto ny dokam-barotra. Raha heverin'ny olona fa tsara izany, dia tsara izany na inona na inona marivo, tacky, smarmy, hackneyed, reraka, mandringa, na inona na inona. Mampihomehy dia mampihomehy, tsara dia tsara ary vokatra no zava-dehibe.
Olona maro eto ambany no efa nijoro vavolombelona fa efa mandinika, manandrana ary mividy vokatra izay tsy nisy olona latsaky ny 60 taona novidina nandritra ny 20 taona.
Ireo lehilahy ireo dia nanosika ny sasany amin'ireo mpanentana ara-tsosialy efa za-draharaha sy maneso indrindra mba hitsambikina sy hampiroborobo ny fampielezan-keviny ary hanome azy io ho antoka eny an-dalambe. Zavatra vitsy dia vitsy no ataon'ny marika.
Hazakazaka an-trano izany!
Jul 15, 2010 amin'ny 11: 22 AM
Fantatro fa mampiasa zava-manitra tranainy aho amin'izao fotoana izao ary nanomboka nividy azy ireo aho tamin'ny fotoanan'ilay dokambarotra malaza hoe 'Mitaingina soavaly'. Tena misaotra an'ilay doka ve izany? Tsy azoko antoka.
Na afaka mandrefy raharaham-barotra vaovao amin'ity fanentanana ity isika na tsia, dia tsy ny vokatra lehibe indrindra. Heveriko fa, araka ny nasehon'i Jeremy Wright tao amin'ny fanehoan-keviny, dia tokony hoheverina ho metrika mendrika ny resaka satria ny resadresaka tsara dia mamaritra ny traikefan'ilay marika sy ny toerana misy azy amin'ny vahoaka. Ny haino aman-jery sosialy dia fomba mahafinaritra hamela marika ho voataonan'ny mpanjifa, izay mamela azy hanakoako kokoa amin'ny mpividy. Tsapako fa ny Old Spice dia tafintohina tamin'ny fihetseham-po mitovy amin'izany izay tsapan'ny mpanjifa 'ampahany amin'ny ekipa' raha lazaina.
Jul 15, 2010 amin'ny 11: 29 AM
Miombon-kevitra amin'i Clay etsy ambany… Tsy nahomby ny GoDaddy satria TSY manolotra fialamboly lavitra, sans boobs, ary fantatrao hoe ... ny fampisehoana boobs tamin'ny 2010 dia mandaitra toy ny Hollywood 'Blockbuster' izay manana 'effet spéciale' mahafinaritra nefa tsy misy tantara … bobongolo (ary nanana tantara tena nahavariana mba hitondrana ny andro)… fa tsaroanao ve, oh, tsy haiko ny fanavaozana ny 'Godzilla' ... ny sarimihetsika Matthew Broderick dia tena maniry ny tsy handre na oviana na oviana na oviana na oviana ... noho ny henatra Matio.
Dokam-barotra GoDaddy = ny fanavaozana mahatsiravina an'i Godzilla … Old Spice = ilay sarimihetsika vaovao Inception (miloka fotsiny fa mafy orina, tsy mbola nahita azy) …
Amin'ity tranga ity, ny doka Old Spice dia mahatsikaiky ary ny fomba sy ny fomba nifandraisany tamin'ny olona dia tena 'mamirapiratra' ... tena tsara izany, vanim-potoana.
Jolay 15, 2010 amin'ny 12:17 PM
Miala tsiny Chris! Heveriko fa tsy mpihaino 'tanora' i @GuyKawasaki sy @AlyssaMilano. Ary koa, ny media sosialy dia tsy mpihaino 'tanora'. Ny fironana dia mampiseho fa ny tapaky ny 30 taona no ho miakatra no manana ny tahan'ny fananganana haingana indrindra amin'ny media sosialy. Filalaovana virtoaly madiodio ity… tondroy ny olona amin'ny aterineto miaraka amin'ny mpihaino marobe, misarika ny sain'izy ireo (sy ny EGO-ny) ary manao zavatra izay mahatonga azy ireo hiresaka momba ny Old Spice.
Tsy niteny aho hoe ratsy marketing izany fa mba manontany tena aho hoe sao dia ny marketing no tena mety.
Jolay 15, 2010 amin'ny 12:31 PM
Ummm… Manao zava-manitra tranainy aho. Tsy tonga saina aho fa tsy lamaody loatra.
Jolay 15, 2010 amin'ny 12:33 PM
Ny famakafakanao momba ny stunt Old Spice = DISO.
Ny horonan-tsary Old Spice dia namirapiratra tsy na inona na inona teo amin'ny efijery, fa ny zavatra lazainy dia mahafinaritra. Tena azoko antoka fa zavatra roa izany: (a) miresaka amintsika izy ary (b) marani-tsaina ny zavatra lazainy. Ny habetsan'ny fahalalana miparitaka nentin'izy ireo tao anatin'ny valin-teniny kely dia sady fohy no mivaingana. Fantatr'izy ireo tsara izay tokony holazaina, ary ny fotoana sy ny fahamaroan'ireo valinteny ireo no tena mahaliana anay. Efa zatra amin'ny traikefa tsy misy maha-olona sy tsy fantatra anarana izahay rehefa mitety tranonkala, hany ka raisina an-tanan-droa ny fikasana hiresaka amin'i Joe Everyman (izany hoe hanapaka ny monotony). Nahoana no malaza amin'izao fotoana izao ny flash mobs? Noho ny antony mitovy (fa mifandraika amin'ny traikefantsika tsy misy dikany ao anatin'ny polisy). Saika tsy ampoizina amin'ny Internet izany satria efa saika toetra faharoa ny ho very amin'ny ady. Ny Old Spice dia nahatonga ny fahafahana hiresaka amin'ny fomba tsy mampino, ary raha nandray anjara izahay dia te-hiditra amin'i Joe Everyman So yeah.
Jolay 15, 2010 amin'ny 12:53 PM
Mitaingina soavaly ve ianao?
Jolay 15, 2010 amin'ny 12:59 PM
Mampiasa vokatra fandroana Old Spice aho. Tsy misy deodorant na zavatra hafa. Ny vokatra douche dia tena tsara. Hitako fa mahatsikaiky rehefa nanomboka teo amin'ny sehatra ireo dokambarotra ireo.
Jolay 15, 2010 amin'ny 1:01 PM
Zandriny noho ny raiko izy ireo, ka eny, tanora kokoa! 🙂 Nanana fahitalavitra nivezivezy teo alohan'ny lafiny media sosialy izy ireo… mbola ezaka ara-barotra amin'ny fantsona marobe izay toa tafiditra ao anatin'ny fanentanana lehibe kokoa. Ny porofo dia ao amin'ny # foana ka tsy maintsy miandry isika ary hijery raha nahomby. Amin'izao fotoana izao dia toa miasa izy io ... nahatonga anao hanoratra momba izany ... ary ny fahafantaranao fa ny tenanao dia mpivarotra marani-tsaina, mino aho fa fantatrao fa ity lahatsoratra ity dia hanangona fifanakalozan-kevitra be dia be ary mampifandray ranom-boankazo koa 🙂
Jolay 15, 2010 amin'ny 1:05 PM
Nick, toy izany koa aho. Saingy mbola tsy mitovy amin'ilay lehilahy amin'ireo dokambarotra ireo aho!
Jolay 15, 2010 amin'ny 1:21 PM
Moa ve ny fampidiran-ketra no antony mamaritra ny fahombiazan'ny media sosialy na tsia ity fanentanana ity? Mety hiangavy ny tsy hitovy aho satria toa ahy fa ny fanehoan-kevitra 26 ao amin'ny lahatsoratrao irery, ny bitsika tsy tambo isaina (an-tapitrisany angamba) ary ny fifandraisana amin'ny media sosialy hafa dia manondro ny tantaran'ny fahombiazana ara-barotra amin'ny media sosialy.
Na dia tsy misy fiakarana mivantana aza dia sarotra ny milaza fa ny fitomboan'ny fahatsiarovan-tena amin'ny marika sy ny fampidirana tsena vaovao dia tsy manan-danja ary manome sehatra ho an'ny ezaka manaraka.
Jolay 15, 2010 amin'ny 1:24 PM
Ny 'fividianana sasany' na ny fisondrotry ny fividianana dia mety mbola tsy manana ny fiverenana amin'ny fampiasam-bola ilaina hanehoana fahombiazana amin'ny fampielezan-kevitra tahaka izao.
Jolay 15, 2010 amin'ny 1:25 PM
Manantena aho fa hivarotra Spice Old bebe kokoa izy io - satria miteraka fahatsiarovan-tena ka amin'ny manaraka ianao ao amin'ny fivarotana dia ho hitanao fa ny Spice Old ankehitriny dia tsy mitovy amin'ny Old Spice nataon'ny dadanao tamin'ny taona 1970. Nanitatra ny tsipikany izy ireo ary ny sasany amin'ireo zavatra vaovao dia tena mahafinaritra.
Jolay 15, 2010 amin'ny 1:39 PM
Saingy na ny marika na ny fahatsiarovan-tena aza ny tanjona farany dia ny varotra.
Jolay 15, 2010 amin'ny 1:42 PM
Isika zokiolona efa elaela no nahita ny fampielezan-kevitra tahaka izao. Nahita ny rehetra nikiakiaka avy eny an-tampon-trano izahay tamin'ny fampielezan-kevitra mamirapiratra, vao nahita ny vidin'ny tahiry sy ny varotra mbola midina any aoriana. Izay no mahatonga ahy hitsikera ity fanentanana ity. Tiako manokana ilay izy ary talanjona aho amin'ny habetsahan'ny tabataba henoko… fa manontany tena aho raha hisy ny fiantraikany maharitra eo.
Jolay 15, 2010 amin'ny 1:43 PM
Nifanarahana tamin'ny teboka rehetra… afa-tsy ny fanontaniana na famandrihana momba ny fahombiazana na tsia ity fanentanana ity.
Ny slam dunk, ho an'ny orinasa rehetra, dia ny fananana varotra mahagaga SY vokatra mahagaga. Tsy isalasalana fa hanosika ny olona hividy ity fanentanana ity … fa raha “maimbo” ny vokatra (fanesorana 😛 ), dia tsy azonao omena tsiny ny varotra.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, mino aho fa ny tanjon'ny fampielezan-kevitra – ho an'ny Old Spice na Dos Equis – dia ny 'Andramo ny vokatrao' ... fa tsy ny 'Ho lasa mpisolovava mandritra ny androm-piainana ho an'ny vokatrako'. Amin'izay lafiny izay dia nahomby tokoa ity fanentanana Old Spice ity!
Jolay 15, 2010 amin'ny 2:28 PM
Marina fa izany ve no tanjona amin'ity ezaka manokana ity? Mazava ho azy fa manandrana zava-baovao izy ireo, manandrana mamelona indray ny marika Old Spice ary manao izany ho an'ny taranaka tanora kokoa. Amin'ny farany dia hitarika any amin'ny varotra izany fa izany ve no tanjona amin'ity ezaka ity sa ny tanjona dia ny fanentanana sy ny fanavaozana ny vokatra izay noheverina ho vokatra efa antitra? Ankehitriny izy ireo dia manana sehatra lehibe ahafahan'izy ireo mandroso sy mampiroborobo ny vokatra miaraka amin'ny fitadiavam-bola ao an-tsaina. Tsy fahombiazana ve izany? Tsy natosiky ny media sosialy ve izany?
Jul 16, 2010 amin'ny 5: 09 AM
Adala izany? Eny. Raha tsy izany dia tsy hiparitaka izany. Ity misy scenario tena izy. Satria ny Old Spice dia nanomboka ny fampielezan-kevitr'izy ireo mba hanentanana ny fifanakalozan-dresaka tsy misy dokam-barotra toa an'ity iray ity, lehilahy maro fantatro no tonga eto midera ny hatsaran'ny vokatra. Ankehitriny aho dia mahatsiaro ho voatery hijery ny fizarana Old Spice amin'ny talantalana amin'ny manaraka rehefa mandeha any amin'ny fivarotana aho. Vao avy nahazo mpanjifa vaovao izy ireo.
Jul 16, 2010 amin'ny 5: 11 AM
Miombon-kevitra amin'i Adama aho, ny tena tantaram-pahombiazana dia mipetraka ao amin'ireo orinasa fanentanana fanavaozana toa an'i Dominoes sy Old Spice dia afaka misintona izay miteraka resabe ilaina ho an'ny olona handraisana anjara sy hanombantombana- dia manantena izy ireo hanova ny heviny hanohanana ny vokatra. Eny, sarotra ny refesina amin'ny fiovan'ny vola miditra mivantana ny ankamaroan'ny hetsika amin'ny sehatra media sosialy ataon'ny orinasa lehibe, fa ny sandan'ny resadresaka tena mahaliana dia lehibe.
Jul 16, 2010 amin'ny 11: 58 AM
Raha tena moana sy mora izany, nahoana no tsy manao izany bebe kokoa? Mamirapiratra ny toerana satria miresaka momba ny Old Spice ny olona. Vanim-potoana. Teny fihobiana.
mitombina ny hevitrao fa tsy misy dikany. Marketing izy io ary mamirapiratra ao anatin'ny hadalana. BTW, heveriko fa ny repartee amin'ny doka Old Spice dia hendry kokoa noho ny GoDaddy.
Jolay 16, 2010 amin'ny 1:54 PM
Manao ahoana ny tsiron'ny jus link? 😛
Jolay 17, 2010 amin'ny 2:51 PM
Tompokolahy, very ampahany lehibe amin'ny tsena ianareo… Tsy natao ho an'ny lehilahy ity fanentanana ity…Vehivavy no lasibatra. Nividy ny entana ho an'ny vadinay sy ny sipa izahay. Ary tianay ny fanentanana.. :*
Jul 26, 2010 amin'ny 9: 49 AM
Eny… mihena ny varotra: http://mkt.gs/dz3AJD
Jul 26, 2010 amin'ny 11: 34 AM
Eny, mivarotra vokatra Old Spice bebe kokoa ity fanentanana ity.
Araka ny filazan'i Neilson Co. Ny varotra dia niakatra 11% nandritra ny herinandro 52, ary tao anatin'ny telo volana lasa, nitsambikina 55 isan-jato ny varotra ary tamin'ny volana lasa dia niakatra 107 isan-jato izy ireo. http://bit.ly/brandweek-old-spice (Brandweek 25 Jolay 2010)
Nahatratra 1.6 tapitrisa dolara ny varotra ho an'ny Faritra Mena nandritra ny fe-potoana efatra herinandro nifarana tamin'ny 11 Jolay, nitsambikina 49 isan-jato nandritra ny fe-potoana efatra herinandro nifarana tamin'ny 21 Febroary, araka ny asehon'ny angona SymphonyIRI. Mampiseho fiakarana ihany koa ireo vokatra Old Spice Body Wash efatra hafa. Niakatra 105 isan-jato ny varotra ankapobeny ho an'ny Old Spice Body Wash tamin'io vanim-potoana io
Raha marina ireo isa ireo dia toa fahombiazana mahagaga izany amiko.
Post 2010 "Old Spice = Lehilahy mitaingina soavaly miresaka sy mizara amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy"